Walaaca degmooyinka soomaalida midoobaysa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Soomalida & Mideyntooda
Walaaca degmooyinka soomaalida midoobaysa
La daabacay torsdag 31 maj 2012 kl 13.16
Warwarka degmooyinka qaabili doona Soomaalida eheladooda loo keenayo, waa qaylo dhaan ka timid qaar kamida degmooyinkaas oo walaac xoogan ka muujiyey in aanay haysan dhaqaale ku filan. Sidaad ku maqasheen barnaamijkayagii isbuuci hore.
Degmooyinka la dejin lahaa Soomaalida qaraabadoodu degen yihiin dalkan Sweden ayaa walaac xoogan ka baxshay dhaqaale xumo ay ka cabsi qabaan marka soomaalidaas la keeno dalkan Sweden.
Dawlada ayaan wali gaadhin go'aan ah dhaqaalihii lagu taakuleyn lahaa degmooyinkaas la dejin doono Soomaalida iman doonta, taaso ay dhawaan degmooyinka qaar walaac ka muujiyeen baahida ay u qabaan in lagu taakuleeyo dhaqaale ay ku daboolaan baahida uga iman doonta eheladaas la keeni doono degmooyinkooda.
Wasiirka is dhexgalka, Erik Ullenhag ayaa sheegay in ay mudo qaadan doonto intii ay dawladu go'aan ka gaadhi lahaayeen dhaqaalaha lagu bixin doono degmooyinkaas, kadib markii qaylo ka soo yeedhay degmooyinka qaar.
- Miisaaniyada deyrta ayaan ku soo bandhigi doona qaybta dhaqaale ee ku aadan arrinkan, sidaan hore uga wada hadalnay degmooyinka waa in la helo xal iyo in dhaqaale la siiyo degmooyinka sidii ay u dejin lahaayeen Soomaalidaas ehelkoodu degen yahay degmooyinka, wasiirka ayaa sidaas sheegay raaciyeyna in aanu indhaha ka qarsanayn dhibaatada arrinkan in degmooyinku u baahanyihiin dhaqaale dheeraada.
Degmooyiin badan ayaa ka walaacsan sida ay dawladu arrinkan u nidaamisay kadib markii maxkamada laanta socdaalku soo saartay go'aanka ah in Soomaalidu ku midoobaan dalkan Sweden bishii janaayo ee sannadkan.
Tobankii degmaba sagaal kamida ayaa u arka in aanay haysan dhaqaale ku filan oo ay ku daboolaan baahida dadyoowgaas loo keenayo qaraabadooda degen qaar kamida degmooyinkaas.
Sidaasi waxay ku caday tira koob aanu ku samaynay 30 degmo oo ay degenyiin Soomaalidu, kuwaaso u arka in aanay helin macluumaad ku filan oo la xidhiidha imaatinka Soomaalida.
Waxa la filayaa in ay yimaadaan in ay yimaadaan tiro gaadhaysa 20.000 oo Soomaali ah, sida ay qorshaynayaan laanta socdaalku labada sanno ee soo socda.
Degmada la filayo in ay Soomaalida badankoodu imaanayaan ayaa ah degmada Växjö oo u gudoomiye ka yahay, Bo Frank.
-Dhibka ugu weyni waa masuuliyada dhaqaalaha oo dawladu degmooyinka korka uga tuurtay, shilin may bixin, taasaana ah dhibaatada ugu weyn. Degmadayada Växjö iyo degmooyinka kale ee soo dhaweeya qaxootiga kamay helin dawlada wax taageero ah, taasini waxay nagu kalifaysaa in aan cashuurta kordhino ama lacagta iskuulaadka iyo ta xanaanada aan ka taageerno Soomaalida cusub ee imanaysa dalka, ayuu sheegay gudoomiyaha degmadaasi Bo Frank.
Degmooyiinkan badan ee ka walaacsan in aan go'aan laga siin taakulaynta dhaqaale jawaab waafiya ayaanu wasiirka isdhexgalku u arkin mid dhibaato ah.
- Waynu arki doona wixii ay noqoto, waxaynu iman doona wakhti jawaab la siiyo degmooyinka, si imaatinka dadka Soomaalida ahi u helaan soo dhawayn wacan ayuu sheegay wasiir Ullenhag